Okugeza Okudumile e Ozerki
Петербург) готовы предложить своим гостям полный комплекс банных услуг. Bani e Ozerki (Petersburg) bakulungele ukunikeza izivakashi zethu uhla egcwele services okugeza. Kulapha zonke ikhasimende uzokwazi uphumule futhi bakhohlwe ngempela mayelana befuna komuzi futhi abuyisele umzimba.
Bath - yindlela enhle yokuthuthukisa impilo yakho kanye nenhlalakahle, isikhathi intsha ngisho ukubabulala Kilos extra.
Bath kuthuthukisa isimiso somzimba sokuzivikela, kuthuthukisa kwegazi, kuvusa inhliziyo. Ngenxa ukusebenza i izithukuthuku ubuthi emzimbeni, ezimbotsheni evulekile kanye isikhumba iqala ukushaya futhi sakwazi ukuphefumula, futhi emva okugeza obukeka engumqemane ngaphezulu futhi nokunwebeka. Intuthu ukwelashwa ukwandisa ukuzinza angokomzwelo nangokwengqondo, ukusiza ekudambiseni ukucindezeleka nokukhathala kuzipha. Uma ukushisa ukuze ungeze amakhambi ewusizo wokuthoba, sikhule size khulula ngesikhathi ephefumula imikhuhlane oyingozi. Uma iziguli ziphathwa usebenzisa umshanelo amalunga omzimba, rheumatism, ukhwaliti ubuhlungu emuva, isifo sokuqaqamba kwamalunga, radiculitis.
Sekuyisikhathi eside Zonke izizwe zomhlaba wasebenzisa okugeza ukuqeda izifo ezihlukahlukene, futhi imithi yesimanje isithuthuke kuqinisekisa umusa izinqubo okugeza kuphela futhi uncoma kubo ngezinjongo zokwelapha.
Enhloko-dolobha enyakatho yeRussia, izinkampani eziningi ngamasevisi e ibhizinisi okugeza, kodwa ethandwa ngaphezulu zokugeza e emachibini.
Izindlu zangasese ngesikhathi Suzdal Lakes
endaweni Ponds iseningizimu indawo olunothile ogwini amachibi ezintathu, uchungechunge lofakazi othiwa Suzdal Lakes. Manje kule ndawo zithandwa kakhulu holidaymakers. Ehlobo, abantu beze lapha ukuze zasemanzini ecacile ngesikhathi amabhishi kahle nokudoba, kanye ebusika kule ndawo ukukhula kwesidingo okugeza izakhiwo. Isenzakalo esidume kunazo zonke zazo yilezi:
"Okugeza Makarovsky" e emachibini.
Isakhiwo itholakala ehlathini ukuzilibazisa endaweni, kude leli dolobha eliphithizelayo, endaweni avaliwe. Izivakashi angaba nabo endlwaneni eyakhiwe lwamakholi, okuyinto has a sauna nge elithambile umusi okugeza okumhlophe kuphela emzini intuthu sauna, le ababhukudi engcono, yokudlela amamenyu, massage.
"Okugeza Makarovsky" - yindawo lapho ungakwazi abuthele inkampani enkulu ehholo amadili noma uhlele usuku romantic at eziko. Inxuluma sibonisa unyaka wonke ithala nehlobo ekhishini, lapho izivakashi kungaba self apheke okuthile, futhi iqashe umpheki oyingcweti, okunguye inganikeza imenyu ukudla okuhlukahlukene ezahlukene.
предлагает к вашим услугам массажный кабинет, лечебный душ-виши и уличную купель, которая не замерзает даже зимой. Ngaphezu kwalokho, "Makarovskaya okugeza" e Ozerki at Suzdal Lakes ikunikeza ikamelo massage, wezokwelapha naseVichy ngigeza futhi emgwaqweni ifonti, okuyinto ayigongobali ngisho ebusika.
Isakhiwo sise Big abangenangqondo, isakhiwo 77.
Indawo ekahle amaqembu, imishado kanye nezenzakalo corporate. Ukuze ukuphumula, eyinkimbinkimbi inikeza amathathu ahlukene indlu ukhululekile endaweni yayo. Cottage itholakala ogwini echibini, i ongaphandle indawo yokubhukuda, masimu eziningana. Esitezi behlaliswe a Russian umusi okugeza, owesibili - itafula pool futhi umbhangqwana amakamelo.
Manor inikeza ngamasevisi wokuhlela imicimbi, impatho okugeza eziyinkimbinkimbi, massage and more. Sise Vyborg onguthelawayeka, 186.
который предлагает возможность организовать праздник на природе. Enye isethi ohlwini ngobhavu ethandwa e Ozerki, okuyinto linikeza ukuthi kungenzeka ukuhlela iholide emaphandleni. Farmstead itholakala emgwaqeni. Big abangenangqondo, ukwakha 29/2. Lapha, izivakashi Cottages ezintathu, ngamunye has a okugeza ayimfihlo aqua-ndawo, igumbi eligcwele impahla yasendlini, eliqatjhiweko. Ungase uthande ukuzibangela kwakuza isikhonzi abanolwazi futhi masseur, ukuthenga imishanelo futhi kudingekile okugeza izesekeli.
, а целый SPA-комплекс, предлагающий услуги премиум-класса. Lena akuyona nje okugeza e Ozerki kanye SPA-eziyinkimbinkimbi, ukunikela amasevisi e-premium. Isebenzisa bagogoda Ochwepheshe massage Balinese futhi Thai, namabhati zikanokusho, a Hammam, i-swimming pool kanye Jacuzzi.
Ngo "ParPalas" ngokuvamile iphatha amaqembu yangasese, imikhosi emikhulu, imibukiso yasekuqaleni. Esinye nesinye isigaba sifaka ku eziyinkimbinkimbi has a imishini elingaphakathi yesimanje esiyingqayizivele. Ukuze massage, beauty zokwelapha futhi amagumbi spa yangasese anikezwa. Uma fan of the VIP-ukuphumula, yebo, woza e "ParPalas" esenina ukuze 1. Kulapha uzofunda uphumule royally.
Ukufaneleka isikhungo inikeza ukubaleka sauna nemikhakha ekilasini ezihlukahlukene. It inikeza amakhasimende ikhefi ethokomele, banzi umhlangano izindawo kanye yabagibeli, amachibi okubhukuda, hot umusi ikamelo, Hammam, bathhouse abanolwazi, amabhiliyade, Karaoke, ejimini nokunye okuningi. I eziyinkimbinkimbi iseduze echibini ku-Great Lake Street, indlu 84a. Ebusika kukhona ithuba ugxumela imbobo.
сегда ждут гостей, которые желают оказаться в мире комфорта, безмятежности и расслабления. zokugeza Suzdal e Ozerki e Njalo elinde izivakashi abafisa ukuba ngo induduzo ezweni nokuzola futhi aziphumulele. Hlela okungcono iholide izakhiwo lapho sajabulela ukwamukela kokubili umzimba nomphefumulo.
Kotor Cosy. Montenegro kanye zokungcebeleka zayo
Population Norway: uhlanga, umsebenzi, imfundo nenkolo
Artyom Troitsky, a umhlaziyi umculo: Biography nesithombe
Tay-Sachs isifo. A ezingavamile esiwufuzo
Izinkolo zendabuko zase-Afrika